dayniile » Wasiirka Maaliyada oo wada qorshe lacag cusub lagu soo sameynayo
Wasiirka Maaliyada oo wada qorshe lacag cusub lagu soo sameynayo
Wasiirka Wasaarada Maaliyada xukumada fedraalka Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Bayle oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa khudbad ka jeediyay Jaamacadda Caalamiga ah ee Harvod, taas oo uu kaga hadlay fursadaha Maalgashi ee Soomaaliya ka bannaan.
Wasir Bayle ayaa yiri”Xukuumadda Soomaaliya waxay sameysay hannaan dhaqaale oo hufan, taasi oo suurta gelisay in lacagaha deynta ahaa ee lagu leeyahay Soomaaliya in laga fududeeyo oo laga cafiyo.”
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulamo la qaadanaya Madaxda Hay’adda lacagta aduunka IMF iyo Banka aduunka.
Bayle ayaa hay’adahaasi u bandhigaya hannaanka Maaliyadeed ee Soomaaliya iyo isbadalada lixaadka leh ee ay samaysay Wasaarada uu madaxda uu ka yahay, Wasiir Beyle ayaa ka hadlaya mas’uuliyiinta uu la kulmayo sidii Soomaaliya loogu saacidi lahaa mashaariic dib u kabasho ah inta uu socdo hannaanka lacagaha daymaha ah looga cafinayo.
Waxaana Arrinta ugu muhiimsan ee Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Dr. C/raxmaan Ducaale Bayle kala hadlayo madaxda Bankiga aduunka iyo IMF ayaa ah in la dadejiyo qorshaha samaynta lacag cusub oo Soomaaliya yeelato, taas oo Wasaaradda Maaliyaddu doonayso in la hirgaliyo sanadkan 2018-da.